Paul Pogba oo kusii dhowanaaya inuu isaga tago Kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 15 Jan 2020. Ciyaaryahanka kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayay u badan tahay inuu ka tagayo Manchester United, inkastoo aysan u badnayn inuu suuqa kala iibsiga bishan Janaayo ka bixi karo kooxdiisa sida laga soo xigtay Sky Sports Germany.
Wararka ka imaanaya gudaha dalka England ayaa tibaaxaya in Paul Pogba ay u badan tahay inuu isaga tago kooxda Manchester United, taas badalkeedana uu kala dooranayo kooxaha xiisaha badan u muujinaya ee kala ah; Juventus iyo Real Madrid.
Kubbad-abuurahii hore ee naadiga Juventus ayaa hadda aan la dhacsaneyn xaaladda kooxdiisa ay kaga sugan tahay tartammada kala duwan oo ay ka qeyb galeyso iyo hoos u dhaca ku yimid maqaamka kooxda Red Devils.
Ninka reer France ayaa qandaraaskiisa haatan uu ku joogo Kooxda Manchester United uu ka harsan yahay kaliya hal sano iyo bar intaa kaddibna waxa uu si xor ah kaga tagi karaa kooxdiisa, waase haddii ay Man United ku guuldarreysto in ay ka saxiixdaan heshiis kale oo dheeri ah.
Wararka ayaa waxa ay intaasi ku sii darayaan in madaxda Manchester United aysan diyaar u ahayn inay si bilaash ah ku fasaxaan xiddiga ah saxiixa rikoorka kooxda.
Real Madrid ayaa inta badan la la xiriirinayey inay la wareegayso ku guuleystaha koobka Adduunka, laakiin Pogba ayaa sida ugu dhaqsiyaha badan uga fikiraya halka haboon ee uu u dhaqaaqi doono.
Miyuu Pep Guardiola qorsheynayaa inuu dhawaan ka dhaqaaqo Kooxda Manchester City?